पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिन्छन् । उनका चालहरु प्रायः अनिश्चित हुने गर्दछन् । दशैंको त्रयोदशीका दिन प्रचण्डद्वारा नेपाली राजनीतिको बुद्धिचालमा एक चाल चालियो, त्यो थिया,े वामपन्थी दलबीच कार्यगत एकताको उद्घोष । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच कार्यगत एकता भएको सन्दर्भ सार्वजनिक भएको थिया,े त्यो दिन । आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी माओवादी केन्द्र र एमालेबीच चुनावी तालमेल भएको जनाइएको त्यस सहकार्यमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीलाई पनि समावेश गरिएको जनाउ दिइएको थियो । तर नयाँ शक्तिको आँखाले राम्ररी आफ्नो स्थान ठम्याउन नसक्दा ऊ त्यो सहकार्यबाट अलग भई आफ्नो साख जोगाउन त्यस पार्टीका प्रमुख अहिले नेपाली कांग्रेससँग नजिकिएका छन् । विगतमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सार्वजनिक भएको सहकार्य घोषणाको कार्यान्वयन् प्रयोजनका लागि प्रत्यक्षतर्फका कूल सिट संख्याको साठी प्रतिशत एमालेले र चालीस प्रतिशत माओवादी केन्द्रले लिने सार्वजनिक भएको छ । अहिले नयाँ शक्तिबाहेकको वाम गठवन्धन् आसन्न चुनावको प्रचार प्रसारमा जुटेको छ ।
विगतमा एमालेसँगको गठवन्धन तोडेर कांग्रेससँग नयाँ गठवन्धन निर्माण गरेको माओवादी केन्द्रले चौदह महिनामै नयाँ राजनीतिक समीकरणलाई जन्म दिएको घट्ना नेपाली राजनीतिका लागि निकै अर्थपूर्ण छ । त्यसो त राजनीतिमा केही पनि निश्चित हुँदेन । विश्वका अन्य देशमा पनि राजनीतिक समीकरणहरु बन्ने गर्दछन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि यसलाई अस्वाभाविकरुपमा लिइनु हुँदैन । अन्यत्र यस्ता समीकरण निर्माणका आधार सैद्धान्तिक हुन्छ्न् नेपालमा भने राजनीतिक समीकरण निर्माणको अभीष्ट प्रायः सत्ता हुने गर्दछ । यसपटकको वाम समीकरण निर्माणको अर्थ, औचित्य र उद्देश्य के हो, अहिलेसम्म स्पष्ट हुन नसक्नुले संशय थप बढाएको छ । तालमेलको उद्देश्य केहो ? मात्र सत्ता भत्काउने र बनाउने वा अन्य केही ? अहिलेसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने निर्वाचनपछि गठवन्धनमा संलग्न वाम शक्तिहरुले संयुक्तरुपमा सत्ता सञ्चालन गर्ने अभिष्ट रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर यसविपरित साँच्चै वामपन्थी शक्ति एक ठाउँ आउने र नेपालको भावी दशा—दिशालाई प्रभावित गर्ने गठवन्धनको उद्देश्य हो भने यसको कालजयी महत्व छ । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने यस्ता समीकरणको निर्माणको सन्दर्भ नौलो होइन । यसपटक सार्वजनिक भएको वामपन्थीबीचको चुनावी तालमेलको उद्देश्य, निर्वाचनमा दुई तिहाई स्थान सुरक्षित गर्ने र भविष्यमा पार्टी एकतामा रुपान्तरित गरिने बताइएको छ । उद्देश्य यही हो भने अन्यथा किन मान्ने ? वामपन्थीको यो पहलले लोकतन्त्रवादीलाई पनि मोर्चावन्दी गर्न प्रेरित गर्नेछ र केही हदसम्म गरेको पनि छ । शायद वामपन्थीको यही गठवन्धनको परिणाम हुन सक्छ, मधेशमा हृदयेश त्रिपाठीको असन्तुष्ट समूहबाहेक अन्य कुनै पनि मधेशी राजनीतिक शक्तिसँग वामपन्थीहरुको तालमेल सम्भव हुन सकेन । बरु यसविपरित यो शक्ति कुनै न कुनैरुपमा कांग्रेससँग नजिकिएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । तर धनुषाको तीन नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाले भने केही संशय उत्पन्न गरेको छ । राजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र छोडेर यहाँ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न निर्वाचनमा होमिएका छन् । स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, किन ? संविधान संशोधन र कार्यान्वयन्, मधेशको विकास तथा मधेशको हक अधिकारको विषयलाई मुद्दा बनाएर चुनावमा होमिएका निधिविरुद्ध नै महतो प्रतिस्पर्धामा उत्रनुले अरु धेरै संशयलाई स्थान दिए पनि एक संशय भने महत्वपूर्णरुपमा उठान गर्न सकिन्छ, महतोको गतिविधि लोकतान्त्रिक गठवन्धनलाई कमजोर बनाएर वाम गठवन्धनलाई बलियो बनाउनेतर्फ त केन्द्रित छैन ? तर यो अनुमानमात्र हुन सक्छ । मधेश क्षेत्रमा निर्वाचन हुन अझै दुई साता बाँकी छ ।
यस पृष्ठभूमीमा वाम गठवन्धनको उद्देश्य लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पाखा लगाउने, लोकतन्त्रलाई मुल्तवीमा राख्ने, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन् नहुँदै कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाको वकालत गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट माओवादीले उन्मुक्ति खोज्ने र सत्तामा वामपन्थी कव्जा गर्ने आदी उद्देश्य हो भने यो चिन्ताको विषय हो । निश्चय पनि खास उद्देश्यहरु भ्विष्यमा सार्वजनिक हुँदै जानेछन् । सेचनीय विषय छ, यी सबै विषयको सरोकार महतोलाई छ कि छैन ? यो विषय उनको चिन्ताको विषय हो कि होइन ? उत्तरहरु अपेक्षित छन् ।
स्थानीय निर्वाचनको लगत्तै र आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको ठीक अगाडी भएको यो वामपन्थी तालमेलले अहिले कार्यरुप ग्रहण गरे पनि यसको प्रयास तत्काल भएको भने होइन । पछिल्लो समयमा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको वरिपरि यसको पृष्ठभूमी तयार भएको हो । यस प्रयासले तेस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि तीव्रता प्राप्त गरेको हो । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) तथा संघीय समाजवादी फोरमको सफलतापछि एमालेले विगतको आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरेको र वाम तालमेलको प्रयासलाई तीव्रता दिएको स्पष्ट छ । प्रदेश नम्बर दुईमा नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा आउनु र क्षेत्रीय दलका रुपमा मधेशवादी दुई दलको प्रादुर्भाव हुनु वामपन्थीका लागि निश्चय पनि सोचनीय सन्दर्भ थियो । यतिमात्र होइन, प्रदेश दुईको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले प्राप्त गरेको लोकप्रीय मत दुई मधेशवादी दलभन्दा बढी भएको पृष्ठभूमीमा वामपन्थीले उक्त मतलाई सीटमा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश दुईको निर्वाचनको प्रभावलाई आगामी निर्वाचनमा न्यून गर्न र लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई किनारा लगाउने उद्देश्यले हालको तालमेल गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छ । सर्लाहीको सुरक्षित छोडेर जनकपुर आएका महतो र उनका समर्थकले अहिले पनि यस तथ्यप्रति सचेत भई कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ ।
अहिले वामपन्थी दलबीच कार्यगत एकता गरी भविष्यमा एउटै वामपन्थी दल निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि संयोजन समिति पनि गठन गरिएको जनाइएको छ । यस सम्बन्धमा अर्को कुरा पनि विचारणीय छ, त्यो के भने मधेशमा क्रियाशील दल र व्यक्ति पनि भोलीका दिनमा यस गठवन्धनमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । आसन्न निर्वाचनको परिणामले मधेशकेन्द्रित दललाई प्रभावित पार्न सक्छ । शायद केही व्यक्ति त्यसैको पूर्वाभ्यासमा सक्रिय रहेको हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस सन्दर्भमा केही कुरा विचारणीय छ, त्यो के भने केन्द्रमा समीकरण बनाउन जति सहज छ स्थानीय स्तरमा त्यसलाई सहज स्वीकार गराउन त्यतिकै कठीन छ । एमालेभित्र असन्तुष्टिको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन र यो तालमेलपछि यस्तो असन्तुष्टिको व्यवस्थापन सहज हुने छैन । सिद्धान्ततः एउटै वामपन्थी दल बनाउनु गलत होइन तर नेपालको इतिहास साक्षी छ वामपन्थीबीच जति एकताको प्रयास गरिएको छ त्यतिकै फूट पनि देखिने गरेको छ । पछिल्लो समयमा स्वयं माओवादी त्यसको उदाहरण हो । विचारणीय कुरा अर्को पनि छ, अहिले चर्चामा आएका तीनवटै वामपन्थी दल मिलेर एउटै दल बनेछन् भने त्यसको मागदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्ने त्यो दलको आन्तरिक समस्या होला तर यस अवस्थामा विगतमा द्वन्द्वकालमा मारिएका र उठिवास लगाइएका एमालेका कार्यकर्ताको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न सहज हुने छैन । यो सन्दर्भ मधेश मुद्दासँग सम्बन्धित छ कि छैन ? विगतमा माओवादीसँग लामो समय सहकार्य गरेका मधेशका राजनीतिक शक्तिले यसको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । यसैगरी प्रश्न अर्को पनि उठ्नेछ, आज एउटै दल बन्नु थियो भने विगतमा विविध वामपन्थका नाममा जनतालाई ध्रवीकृत किन गरियो ? यस्तै विगतको द्वन्द्वकालका कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति (वर्तमान पनि प्रभावित छ ।) को अंशियार एमाले हुने कि नहुने ? मधेशले यसबारे सोच्ने कि नसोच्ने ?